Weerar lagu laayay kooxo Islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Burkina Faso | dayniiile.com
Home WARKII Weerar lagu laayay kooxo Islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Burkina Faso
Weerar lagu laayay kooxo Islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Burkina Faso
Ciidamada Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 128 dagaalyahanno ah oo ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta ah lagu dilay saddex howlgal oo militariga dalkaasi sameyeen.
Dowladdu waxay sheegtay in howgallada dhulka iyo cirka ah ee lagu sugayo ammaanka la xoojiyay bartiamihii bishii May iyo bishaan Juune ee aan ku jirno. Burkina Faso ayaa la dhibaatoonaysa weeraro joogta ah oo kaga imaanaya kooxaha jihaad doonka ah tan iyo sanadkii 2015-ka.
Bishii la soo dhaafay weerar ka dhacay magaalada Seytenga ee waqooyiga gobalka Saaxil,ayaa lagu dilay in ka badan 80 qof waxaana ku barakacay kumannaan kale.
Bishii Jannaayo ee sanadkaan milatariga ayaa af-gembi kula wareegay awoodda waxayna dowladda ku eedayen in ay ku fashilantay wax ka qabashada ammaanka iyo weerarada ay gaysnayana kooxaha dowladda ka soo horjeeda.
Previous articleKuleel xad-dhaaf ah oo ka jira dalka Ciraaq iyo dalal kale oo laga cabsi qabo inuu gaaro Isniin: June 20, 2022 Dalka Ciraaq ayaa waxaa ka jira kulayl daran iyadoo heer kulku qeybo ka mid ah dalkaasi uu kor u dhaafayo konton digree. Magaalada Basra ee koofurta dalka ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee dhibaatada ay ka dhacday. Madaxweynaha Ciraaq, Barham Saleh, ayaa u sababeyay sare u kaca heerkulka, abaaraha sii kordhaya iyo isbeddelka cimilada oo uu ugu yeeray “khatar jirta” oo dalku wajahyo. Dalka deriska la ah ee Sacuudi Carabiya, Xarunta Qaranka ee Saadaasha Hawada ayaa ka digtay heerkulka in sidoo kale uu dhaafi karo konton cabbirka heerkulka toddobaadkan. Illaa hal milyan oo Muslimiin ah oo ka kala imaanaya caalamka ayaa isu diyaarinaya inay u safraan magaalada barakeysan ee Maka si ay u soo gutaan waajibaadka xajka bisha soo socota. Office Nairobi Kenya
Next articleYurub oo ka shiraysa sidii Galleyda ku xaniban Ukraine loo gaarsiin lahaa dalalka u baahan
Burcad badeed xabsi daa’in ugu xirnaa dalka Cumaan oo lagu celiyey...
Dad Muslimiin Ah Oo Lagu Laayay Gobolka Amxaarada Ee Dalka Itoobiya